Amadoda ngokuThenga kwabasetyhini kwi-Intanethi | Martech Zone
Ngubani othanda iingcinga zesini? Ndiyayenza… ndiyayenza… ubukhulu becala kuba yonke into ethetha ngwevu, amadoda atyebileyo aqhawule umtshato kwiminyaka engama-40 ayabonakala kwindlela endiphila ngayo. Ndingumzingeli oqhelekileyo xa kufikwa ekuthengeni… ndiyafuna, ndiyafumana, ndiyaphuma apho. Uphando lwam luqala ngesiqhelo emva kokuba ndiyivulile ibhokisi ndafumanisa ukuba ndithenge into ebendingayifuni, ndingayifuniyo, okanye ndingayiqondi. Ndingutata ongatshatanga ohlala nentombazana eneminyaka eli-19 ubudala, uKatie, ongomnye wabathengi abangakholelekiyo endakha ndababona. Akazange azizuze njengelifa imikhwa yam, ke ndiza kuthi ikwimfuza yesini.
Le infographic evela Inzwa yokuhlawula Uyayichaza… Nazi izinto ezi-6 eziphambili zophando ezivela kuphando lwabo kwindlela yokuthenga eyindoda nakwabafazi:
Baninzi abantu basetyhini abathenga i-intanethi
Abafazi ngabazingeli beengxoxo
Abasetyhini baya kwizinto ezenziwe ngezandla kunye neediliya
Itekhnoloji yamakhwenkwe nezihlangu zamantombazana? Cinga kwakhona
Abafazi bathanda iiapps
Ngaba ufuna ukukhuthaza uphawu lwakho kwinani labantu ababhinqileyo? Ngena kwimidiya yoluntu
Ewe kunjalo, konke oku kuyayixhasa into yokuba ngamabhinqa alawula umhlaba!
tags: abantukuthengwa kwi intanethiTwilleyRedditabafazi